Sei Kusarudza Yako Jekiseni Rongedza?
Ndeipi injector / injector yandinoda? Chinangwa chechinyorwa chino ndechekubatsira iwe kusarudza rongedza rakakodzera rako kemikari jekiseni chirongwa. Iyo jekiseni inorongedza ndiko kubatana pakati peiyo jekiseni pombi uye zvakaumbwa zvinhu zvekubaya jekiseni rekusimbisa makemikari akasiyana, kusanganisira epoxy resin ...
Jekiseni Rongedza Zvigadziriso Zvepasi Kuvaka
Tsvaga mutsauko pakati pe pre-jekiseni uye post-jekiseni masisitimu mukuvaka kwepasi pevhu. Izvo zvinobatsira kusarudza izvo zvakanaka mamiriro ezvinhu akakodzera muchikamu chekugadzira. Jekiseni rinogona kutsanangurwa sekuunzwa kwezvinhu zvakamanikidzwa muvhu kana chimiro chemvura ...
6 Basic Mitemo Ye jekiseni Pombi Machine Piping
Kuisa nyowani centrifugal pombi? Mushure mekunyatso sarudza yakakodzera saizi uye zvinhu, ita shuwa yekuisa iyo nyowani pombi nenzira kwayo kuti uve nechokwadi chekubudirira kuisirwa. Izvo zvakakosha kuseta hwaro nemazvo uye kuenzanisa jekiseni pombi muchina. Izvo zvakakoshawo kwazvo kupedzisa iyo p ...
Kuyera Kubudirira KweKemikari Grouting
Infrared thermal imaging: nekukurumidza uye kwakavimbika kuongororwa kwemakemikari grouting shotcrete zvimiro Chemical grouting ndiyo imwe yemaitiro akajairika ekugadzirisa kutsemuka uye kupinza kwemvura muzvivakwa zvekongiri. Ku-non-invasive kuyedza Kuderedza kupindira kwezvimisikidzo zvimiro pakuitisa su ...
Ndeipi Polyurethane Grouting Iyo Inogadzirisa Kugadzirisa Solution?
Iko kushandiswa kweiyo polyurethane grouting mumiriri muvhu densification uye dhizaini kudzoreredza kuri kuchinja zvachose nzira iyo veruzhinji vanoshanda mamaneja uye maneja maneja vanofunga nezve kudzoreredza uye kutsiva. Nekuda kwemutengo-unoshanda uye hutsva mujekiseni tekinoroji, iyo feasibilit ...
Ungasarudza Sei Injection Packer
Iyo jekiseni inorongedza ndiko kubatana pakati peiyo jekiseni pombi uye zvakaumbwa zvinhu zvekubairira akasiyana simbiso makemikari, kusanganisira epoxy resin (EP), polyurethane (PU / PUR / SPUR), polyurea, acrylic gel, mvura inoshanda Foam grouting, siloxane, siliconized zvigadzirwa , microemulsion, grout, c ...
Nzira Yokuwana Nayo Yakakwana Mafuta Giripiti Coupler
Icho chinhu chinozivikanwa chekuti lubricating bushes uye bearings zvinogona kuchengetedza yakawanda kupfeka. Kuderedza kutadza uye kugadzirisa kunodhura ibasa rakakosha kwazvo, asi zviri nyore kufuratirwa! Heano mamwe matipi anogona kukusevha mari yakawanda uye nguva. 1. Virtual lubrication: Wakambofunga here ...
Zviratidzo zveHuru Pressure Injection Pump kutadza
Injini yedhiziri inomhanya isina kana kana zvachose inogona kukonzerwa neakanyanya kumanikidza kuendesa matambudziko. Mazhinji enjini dzemazuva ano dzedhizili dzine zvemagetsi zvinodzora yakadzvanya masystem Mahara akanyanya kumanikidza masisitimu aishandisa mechina yakanyanya kumanikidza pombi. Yakakwira kumanikidza kuendesa matambudziko kunogona kukonzera yakaderera simba, rou ...
Yakakwira Pressure Grease Inokodzera Uye Zvekushandisa
Yakakwira Pressure Grease Inokodzera (kana girizi zamu, Zerk fittings, girizi plugs, Alemite fittings, Zerk) ndiwo lubrication mapoinzi muchimakanika system, uye girisi inogona kuwedzerwa kubva pagirisi pfuti. Nekushandisa kumanikidza kune bhora vharafu mune inokodzera, iyo girisi inoyerera ichipinda girisi chamb ...
Ko Polyurethane Inoita Kuti Wood Isapinda Mvura Here?
Kwete, polyurethane haigone kugadzira huni yakaoma kuti isapinda mvura, asi inogona kuita kuti huni isapinda mvura. Polyurethane inopa dziviriro kumatanda akaoma. Inogona kudzosera mvura uye kudzivirira kutorwa kwemvura, asi haizombodzivharira zvachose mvura, saka haizomboiti 100% isina mvura. Polyurethane inogona zvakare kudzivirira woo ...
Yakakwira Pressure Grouting Machine Shongedzo- Grouting Packer
1. Chii chinonzi Injection Packers? Grouting packers, inozivikanwawo seye grouting nozzles, anoshandiswa zvakanyanya mukuchengetedza mvura uye hydropower, tunnel, matunhu ehurumende, maindasitiri uye ehurumende kuvaka uye mamwe minda, kunyanya mumunda wekongiri yemakemikari grouting. Icho chikamu chikuru cheiyo yepamusoro-pre ...
Kunzwisisa Waterproof Resin Kuputira Chiyero PaTende
Mugadziri wega wega ane nzira yake yekuita kuti matende asapinda mvura, UV isingagone uye kufema panguva imwe chete. Chiyero chisina mvura chechinhu ichi chiri mumamirimita, inova iyo tsananguro yauri kutsvaga kana uchienzanisa matende. Iyo nhamba iri pakati pe800 mm uye 10,000 mm. Nhamba yacho inoreva ...